Ny fitondran-tena ara-pananahana dia manova ny atidoha | Valin'ny Fanamarinana
Home fianarana Fiantohana ara-pananahana
Ny fahatanorana dia vanim-potoana eo amin'ny fivoarantsika raha vonona ny ho tonga fatra-pananahana (na programmed) ny ati-doha ho fiomanana amin'ny fahamatorana. Izany famerana izany dia mety hitranga amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ireo vady tena izy sy / na amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Ity fianarana ity dia hanangana làlam-pandehanana mafy haingana. Hanova ny atidohantsika sy ny toe-tsaintsika amin'ny firaisana sy fitiavana izany amin'ny ho avy. Ireo rehetra ireo dia mifototra amin'ny zavatra ianarantsika mandritra ity vanim-potoana fampandrosoana lehibe ity. Mety ho sarotra ny manala ny fahazarana lalim-paka lalim-paka niforona nandritra ity fotoana ity amin'ny dingana manaraka.
Hatramin'ny nahatongavan'ny Internet, dia nijery sary vetaveta tao amin'ny gazetiboky na DVD ireo tanora, notarihin'ny atidoha tampoka tamin'ny firaisana. "Hibaliaka" izy ireo satria ny fitaovana toy izany dia ho an'ny olon-dehibe ihany. Matetika izy no nafenin'ny ray, zokiny na mpikarakara fivarotana. Ampiasainy mora kokoa ny eritreritr'izy ireo mba hieritreritra ireo olo-malaza na tovovavy ao an-dakilasy hamotsotra ny fifandirana ara-pananahana. Rehefa nanomboka nifampiresaka tamin'ny zatovolahy sy ny zatovolahy hafa izy ireo, dia nandeha tamin'ny làlana mampihetsi-po lalina izy ireo mba hijerena ny vatan-tenan'izy ireo izay manoloana ny firaisana ara-nofo amin'ny fotoana iray.
Androany ny ankamaroan'ny tanora dia 'manomboka' ny fanadihadiana ara-nofo ataony amin'ny pôrnôgrafika mafy handrehitra ny nofinofisin'izy ireo. Tsy manomboka sary malemilemy amin'ny vehivavy mitafy akanjo kely izy ireo amin'ny sary tonga eto. Maherin'ny 80% ny fitaovan'ny pôrnôgrafia misy herisetra ara-pananahana amin'ny vehivavy. Ny fitaovana manaintaina sy manaitra dia manaitaitra ny lahy sy ny vavy indrindra fa ny atidohan'ny adolantsento satria manana tokonam-baravarana ambony noho io fientanentanana io noho ny atidohan'ny zaza na olon-dehibe. Afaka mahita fitaovana mahery vaika kokoa ny olona amin'ny fotoana iray amin'ny finday avo lenta noho ny hitan'ny raibeny nandritra ny androm-piainany. Ny vokatr'ity sary vetaveta mafy ity dia mamerina ny atidoha sy ny asany.
Ny atidoha dia tsy miovaova amin'ny pôrnôgrafia
Ny atidohantsika dia tsy niova mba hiatrehana ity tsunami momba ny fitaovana hipetrapetraka izay efa hita nandritra ny folo taona farany noho ny fahatongavan'ny aterineto. Ny fiantraikany ara-pahasalamana voalazan'ny tanora sy ny matihanina amin'ny fitsaboana dia ny: depression; sosokevitra ara-tsosialy; fitokonana sosialy; zavona atidoha; Ny fijerena am-pihetseham-po ny fijerena sary vetaveta amin'ny aterineto na eo aza ny vokany ratsy sy ny aretin-kozatra.
Inona ny atidoha atao rehefa tsy nahazo alalana hahazo valisoa be loatra izay tsy nipoitra velively izy? Ny atidoha sasany dia mampifanaraka - fa tsy amin'ny fomba tsara. Ny dingana arahina dia miakatra. Amin'ny voalohany, ny fampiasana ny pôrnika sy ny masturbation amin'ny orgasme dia mamaha ny fihenjanana ara-nofo sy ny fisoratana anarana ho fahafaham-po.
Saingy raha mihazona mafy ny tenantsika isika dia mety manomboka manohitra antsika ny atidoha. Miaro ny tenany amin'ny dopamine tafahoatra izy amin'ny fihenam-bava ny fahamendrehany, ary mihatsara ny fihatsarambelatsihy. Mampihena ny fampiasana ny dopamine ny mpampiasa sasany ho amin'ny fikarohana lalindalina kokoa ho an'ny fanentanana, izay, hany ka mitondra fiovana maharitra, fiovana ara-batana tena ilaina amin'ny atidoha. Mety ho sarotra ny hivadika.
Nahoana no tokony ho izany no izy? Inona no tsy mitovy amin'ny pôrnôgrafia fahiny?
<< Fahatsiarovana & fianarana Debutan'ny pôrnôgrafia & fanombohana voalohany >>